China HY290-I okpukpu abụọ-bed sunshade net igwe HY290-II okpukpu abụọ-akwa akwukwo nri net igwe emeputa na Supplier |Aoyuan
HY290-I igwe ụgbụ anwụ anwụ nwere akwa abụọ HY290-II igwe net nri nwere akwa abụọ.
Netwọk sunshade nwere ezigbo ndo nke anwụ, obosara obosara na nnukwu mkpụrụ.Ọnụego sunshading sitere na 50% ruo 90% na oghere eriri akpaka kpara akpa.
Netwọk sunshade nwere ezigbo ndo nke anwụ, obosara obosara na nnukwu mkpụrụ.Ọnụego sunshading sitere na 50% ruo 90% na oghere eriri akpa akpa akpa, akpa net nwere ọrụ nke ngwa dị mfe, ikuku ventilashion na ọnụ ala dị ala nke mbukota.
The warp knitting Machine specializes in amịpụta netted jacquard, dị ka netted ákwà mgbochi, netted table ákwà, na-agbanwe na un-elastic netted dlothing na lace.The Nchikota multi-bars, na thread presser eme ka jacquard ike na mmetụta nke igwe. , yana mmepe na ngwa nke eriri ọhụrụ dị iche iche, na-arụ ọrụ nke igwe modem multi-bar warp-knitting machine na eriri presser, na-emezigharị usoro nke kpara akpa na usoro ịcha akwa ọhụrụ, multi-bar warp-knitted fabric na eri. presser nwere n'ihu mma na ọrụ, mpụga ọdịdị na àgwà etc.Na ọ na-ọtụtụ-eji maka ụdị nile nke colthing na ezinụlọ ngwaahịa.
Igwe ụgbụ anwụ anwụ bụ nke a na-ejikarị ejikọta ụgbụ sunshade, nke a na-ejikarị eme ihe ọkụkụ n'ụlọ plastik, sunshade maka okooko osisi na osisi tii, ebe ebe a na-azụ anụ ọhịa wdg. A na-ejikarị akpa ụgbụ ahụ maka ngwugwu nke ụdị mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị iche iche.
Mba nke agịga
Ọsọ na-agbanwe agbanwe ugboro ugboro
( ogologo * obosara * ịdị elu ) (mm)
Igwe anaghị agba nchara (m2)
Enwere ike ịhazi obosara na nlele kwekọrọ na arịrịọ
Isi loop na-akpụ akụkụ nke igwe kpara akpa bụ agịga akwa, agịga ntuziaka yarn, sinker na efere ịpị (eji igwe crochet).A na-ahazi agịga na-akpa n'ahịrị n'ahịrị n'elu akwa agịga ma jiri akwa agịga na-aga.A na-etinye agịga nduzi yarn n'elu bọọdụ ahụ iji mepụta mmanya comb.Warp ahụ na-agafe oghere nke agịga nduzi, na-aga na mbo bar, na-emerụ na agịga.A na-akpa ákwà ahụ site na mmegharị a na-ahazi nke agịga kpara akpa, sinker na akụkụ ndị ọzọ looping.
Nke gara aga: HY283 usoro okpukpu abụọ agịga akwa warp knitting igwe
Osote: Igwe eji akpa akwa HY303
HY399 igwe eji akpa akwa Warp na-agba otu akwa